Fikarohana momba ny firaisana Fanahy izay orza ary ny trangam-panjakan'ny zaridaina Shanti Devi Mathur - Fikarohana momba ny vatana
Fanahy Orbona ary ny Trangam-panjakan'Izany ao Shanti Devi Mathur
Hatramin'ny firoboroboan'ny fakantsary nomerika, izay mitaky hery kely kely fotsiny mba hisamborana sary iray, dia lasibatra ireo zavatra ireo izay nofaritana ho tsangambato. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Ny fanazavana amin'ny fomba mahazatra sy mahazatra ho an'ny orza sasany dia ny famokarana volom-borona na rotsak'andro izay mampiseho ny hazavana avy amin'ny flash. Ny fomba fiasa mety hamokarana ireo org ireo dia hazavaina ao amin'ny tranonkala manaraka:
Orbs novokarin'ny Atmospheric Particles
Ny poti-vovoka sy ny vongan-drano anefa tsy afaka manazava ny sary orb rehetra ary inoana fa orb dia maneho fanahy. Niara-niasa tamin'ny mpanelanelana amin'ny trance aho Kevin Ryerson hatramin'ny 2001, izay midika anarana hoe Ahtun Re, izay tena manan-tsaina indrindra no nifaneraserako ary naneho ny fahafaha-manao ny lalao iainana taloha miaraka amin'ny mari-pahaizana marina. Ahtun Re dia nanamafy fa ny kintana izay tsy vokatry ny vovoka na rano dia mampiseho ny zavaboary. Hiantso ireo kisendrasendra ireo isika.
Antony fa tsy ny Orba rehetra dia azo avy amin'ny volokano na ranom-boankazo:
Raha misy andian-tsary maromaro nakatona haingana, dia tsy misy orbs mihitsy ao anaty sary iray, ny saripika faharoa dia mety manana kofehy marobe ary amin'ny sary fahatelo, ny gorodona dia hanjavona. Tsy mety hitranga izany amin'ny alalan'ny fisaintsainana ny rotsak'andro na ny rano, satria tsy miova ny toetr'andro amin'ny fotoana iray mankany amin'ny iray hafa. Io fisehoan-javatra io koa dia manondro fa ny tononkalo dia toa afaka misafidy raha hita na tsia izy ireo, izay mampisaintsaina ny teoria fa izy ireo dia misolo tena olona.
Rehefa maka sary ny olona maromaro miaraka amin'ny fakantsariny mitovy, ny olona sasany dia hahazo kobam-bolo marobe raha toa kosa ny olona tsy manana kintana dia miseho amin'ny sary. Raha ny rambony dia vokatry ny vovoka na rano fisotro, ny mpaka sary tsirairay dia tokony hanana mitovy ny isan'ny orbs ao amin'ny sarin'izy ireo. Ity fanamarihana ity dia manohana ny teoria fa ny sehatry ny angovo avy amin'ny mpaka sary dia manana fiantraikany eo amin'ny sarin'ny tononkalo fanahy.
Ity hevitra ity dia mifanaraka amin'ny fanamarihana mifandraika amin'ny fitaovana ara-batana, olona izay afaka mifindra toerana sy mamela ireo zavatra ara-batana tsy misy antony mazava. Ao amin'ny bokiko ateraka indray, ny tranga indray vao teraka tamin'ny DD Home | Uri Geller dia naneho fa ny fahaiza-manaon'ny fampitaovana ara-batana dia afaka manitatra mandritra ny androm-pahavelomana roa. Samy nodinihan'ireo mpahay siansa fanta-daza tamin'ny androny ny trano sy ny Geller, ary voamarina ny fahaizan'izy ireo manimba ny zavatra tsy voakasik'izany. Rehefa nanontany an'i Ahtun Re aho hoe nahoana ny Home sy Geller no mety hamoaka izany tranga izany raha ny ankamaroan'ny olona tsy afaka, Ahtun Re dia nilaza tamiko fa tokony hiasa amin'ny sehatry ny angovo ao amin'ny fanahin'ny Home | Geller. Amin'ny lafiny iray, ny sehatry ny angovo avy amin'ny mpaka sary dia mety hitondra anjara biriky amin'ny angovo izay mahatonga ny orana ho hita maso.
Ny orbs dia nalaina tao amin'ny efitrano fidiovana fanaovana laboratoara, toy ireo izay natao tamin'ny famokarana solosaina solosaina, izay ahafahan'ny vovoka na ny rano ho ampy mba hamokarana vokatra azo tsapain-tanana.
Ny vovobon-tsingoka mifanakaiky amin'ny fakantsary dia manjary tsy mety sy tsy voafaritra. Mifanohitra amin'izany kosa, ny tononkira ara-panahy dia mitovitovy amin'ny fahatsarana sy ny fahamendrehana, na aiza na aiza, na akaiky na lavitra ny fakantsariny.
Ny kafe ara-panahy dia naverina imbetsaka tao amin'io toerana io ihany, nanondro fa ny fanahy izay tafiditra ao dia nifidy izay toerana hipetrahana ara-jeografika. Ny doro-drano sy ny rano dia mihetsika tsy tapaka, izay tsy mamela ny orza haka sary amin'ny toerana voafaritra mazava.
Ny orbs dia nalaina tamina haingam-pandeha haingana, miaraka amin'ny hafainganam-pandehanana izay mivezivezy amin'ny 500 kilaometatra isan'ora. Ny vovoka na ny rano dia tsy afaka mandeha amin'izany fifadian-kanina izany.
Ireo orbes dia toa afaka mampiseho ny saina ataon'ny vondron'olona, ​​izay hisehoany sy hanjavona miaraka ary hiara-hiasa, tahaka ny andian'ireo vorona.
Orbs dia nalaina sary tamina endrika tsy simetrika anatiny, toy ny banga na lavaka, izay tsy vitan'ny sombintsombin'ny rivotra. Ny orb sasany aza toa manana tarehy olombelona. Tsindrio ny sary orb omena amin'ny ankavanana ary zahao raha afaka mahita ny tarehin-dehilahy ao anatin'ny orb ianao.
Ao amin'ny Tranom-balisoa ao amin'ny Reincarnation of Shanti Devi Mathur, i Shanti dia manoritsoritra ny zavatra mety hahatsapa ho toy ny fanahy maha-orb
Ny mahaliana, amin'ny tranga vao teraka indray ao Lugdi Chaubey | Shanti Devi Mathur, Shanti dia nahatsiaro ny fifandresen-dahatra teo amin'ny nahafatesan'i Lugdi sy ny fahaterahana indray Shanti. Ny ampahany tamin'ny zavatra niainany dia nitodika tamin'ny haben'ny ampahany kely amin'ny vovoka na mikraoba iray. Ho an'ity ampahany kely ity, nilaza i Shanti fa afaka mamindra toerana amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa izy ary tsy misy antony hafa, dia nahatsapa ho toy ny hoe izao tontolo izao manontolo no tao aminy.
Shanti dia afaka mamariparitra ny zavatra toy ny hoe orza ara-panahy. Ireo medaly izay mifandray amin'ny maty dia milaza amintsika fa ireo olon-tiantsika any amin'ny tontolon'ny fanahy dia mifamatotra amintsika hatrany ary tonga manakaiky antsika rehefa mila izany. Toa hita fa ny fanahin'ny orbs dia ny fisehoan-javatra hoe iza isika rehefa afaka amin'ny vatana.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny tantaran'i Shanti, izay notohanan'i Mahatma Gandhi, mankanesa any:
Tranom-pitaovam-panjakan-dRahely ao Lugdi Chaubey | Shanti Devi Mathur
Resource: Orbs: Ny iraka sy hafatra momba ny fanantenana, nataon'i Klaus Heinemann, PhD sy Gundi Heinemann, Fanazavana fanampiny B, pejy 115-119